နန်းသီရိလွင်| January 7, 2013 | Hits:5,219
| | ကချင် ပြည်နယ် မိုးညှင်းမြို့နယ် နမ့်မွန်း ကျေးရွာ အုပ်စုရှိ ကျေးရွာ ကာကွယ်ရေး ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ စခန်းကို ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA) က ၀င်ရောက် ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ လူတဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
thihamin January 7, 2013 - 8:58 pm KIA/KIOမှ ဒူးဝါးလနန်သို့ -
Reply Than Naing January 7, 2013 - 9:40 pm Thanks your updated news all.
Reply အောင်အောင် January 7, 2013 - 9:54 pm kia ဘက်တော်သား အပေါင်းတို့ ခင်ဗျား မည်ကဲ့သို့ သော မှတ်ချက်များ ပေးကြပါမည်နည်း ခင်ဗျား။
Reply rain January 9, 2013 - 9:51 pm ဒိနေ၇ာကျသူတို့ နှာစေးနေကြလို့ ပါဗျာ စစ်တပ်က စခန်းတခုသိမ်းပြိး၇င်တော့အသံထွက်လာမှာပါ လူ့ အခွင့်အရေးချိုးတာတွေကြိးနိုင်ငယ်ညှင်းတာတွေ ခက်တော့ခက်သား အပြစ်မဲ့ ပြိးမြေဇာပင်ဖြစ်နေတဲ့ကိုယ့်လိုပြည်သူတွေ ဒိလို နိပ်စက်တာကျ kiaအပြစ်မ၇ှိတော့ဘူးလား ငြိမ်းချမ်းေ၇းကိုတောင်းဆိုတာအမှန်လား kiaလုပ်သမျှထောက်ခံတာအမှန်လားးး
Reply Shwe Yoe January 8, 2013 - 6:26 am Please! Please! Do not continue hatred to rule over us. Attacking poor militia who are forced to act like soldiers will not help. Fightingagood fight will give you honor but attacking poorly armed militia will make you idiot.
Reply မမ January 8, 2013 - 2:47 pm ကလေးကလားဆန်တဲ့လုပ်ရပ်တွေများများလုပ်ရင်တော့KIAအမြန်ကျဆုံးမှာဘဲ။
Reply လဆိုင်း January 8, 2013 - 9:14 pm ကေအိုင်အေက သတ္တိရှိရင် စစ်တပ်ရဲ့ စခန်းတွေကို တိုက်ခိုက်ပါ။မဆိုင်တဲ့အရာတွေကို မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့။ကေအိုင်အေ ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်း မေးကြည့်ကြပါ။ငါတို့ လက်အောက် ငယ်သားတွေကိုလည်း တကယ်တန်ဖိုးထားလား၊ မိမိတို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေပဲ ကြီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာအောင် ကြံဆောင်နေတာလား၊ တကယ် ကချင်ပြည်နယ်ကလူထု အတွက်လား ကွဲကွဲပြားပြားသိအောင် ကြိုးစားပြီး စုံစမ်းစေချင်ပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ နေတဲ့ ပြည်သူ လူထုကိုကြီးပွားအောင်မလုပ်ပေးချင်နေပါစေ ဒုက္ခမပေးပါနဲ့လို့ ပြောချင်ပါတယ်။